एनआईसी एशिया बैंकको स्वामित्वमा रहेको ३ ओटा कम्पनीको संस्थापक शेयर आजदेखि लिलामीमा
साउन ३, काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको तीन ओटा कम्पनीको संस्थापक शेयर आज (आइतवार)देखि लिलामीमा आउने भएको छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोष, आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर लिलामीमा आउने भएको हो ।
नागरिक लगानी कोषको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार २२१, आरएमडीसी लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. ४८१ र मेरो माइक्रोफाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. ५४१ तोकिएको छ । बोलकबोल गर्दा तोकिएको मूल्य वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३ ओटै कम्पनीको शेयर खरीदको लागि न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सबै कम्पनीको शेयर विक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।